विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ३९ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? Canada Nepal
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ३९ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
काठमाडौं - कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउने र संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिका, भारत, ब्राजिल, रसिया लगायतका देशहरु बढी प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभरमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ३९ हजार १ सय ८५ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या २ करोड ९७ लाख २७ हजार २ सय ५३ पुगेको छ । यस्तै विश्वभरमा कोरोनाबाट संक्रमण भएका २ करोड १५ लाख ४२ हजार ३ सय ६१ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
हालसम्म अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट २ लाख १ सय ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ६७ लाख ८८ हजार १ सय ४७ पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या १ लाख ३३ हजार २ सय ७ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ४३ लाख ८४ हजार २ सय ९९ पुगेको छ ।
त्यस्तै अर्को देश रसियामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८ हजार ७ सय ८५ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १० लाख ७३ हजार ८ सय ४९ पुगेको छ ।
भाद्र ३१, २०७७ बुधवार १०:५९:०२ बजे : प्रकाशित